WordPress: MySQL Search na Dochie iji PHPMyAdmin | Martech Zone
Emere m mgbanwe ntakịrị na nhazi peeji m taa. Agụla m Blog nke John Chow na na Blog nke Problogger na itinye mgbasa ozi gị n'ime ahụ ọkwa nwere ike ibute mmụba dị ukwuu na ego. Dean na-arụkwa ọrụ na ya.
Na saịtị Darren, ọ na-ede na ọ bụ naanị ihe gbasara ndị na-agụ ya anya. Mgbe ọkọlọtọ dị n'elu peeji ahụ, onye na-agụ ya na-amafere ya na-enweghị mgbado anya. Agbanyeghị, mgbe mgbasa ozi ahụ dị n'aka nri nke ọdịnaya, onye na-agụ ya ga-agafe ya.
Ga-achọpụta na m ka na-anwa idebe ihu akwụkwọ m ọcha - na-etinye mgbasa ozi na mpụga nke blog posts. Ekwenyesiri m ike na ịgbanwe nke ahụ na ime ka ha mara ihe nwere ike ime ka m nwetakwuo ego; Agbanyeghị, m na-alụ ọgụ mgbe ahụ n'ihi na ọ ga-emetụta ndị na-agụ akwụkwọ m na-echekarị maka - ndị na-eleta ibe m kwa ụbọchị.
Otu n'ime nsogbu na itinye mgbasa ozi a n'elu aka nri bụ na nke a bụ ebe m na-etinyekarị ihe ngosi maka ebumnuche ịchọ mma na iji dozie nri m na mee ka ọ dị iche na ndepụta ndị ọzọ. M na-agbanwekarị otu mpempe clipart ma aka nri ma ọ bụ aka ekpe na post iji:
Foto aka ekpe:
Foto aka nri:
Mara: folfọdụ ndị folks na-achọ iji ụdị maka nke a, mana nhazi ahụ anaghị arụ ọrụ na ntanetịime gị CSS.
Imelite ọ bụla post-eji Search na Dochie:
Iji gbanwee onyonyo ọ bụla n'otu ọkwa ọ bụla iji hụ na esetịpụrụ m ihe oyiyi niile ziri ezi nwere ike ịme ngwa ngwa site na iji nyocha Mmelite na PHPMyAdmin maka MySQL:
melite table_name setịpụrụ table_field = dochie (table_field, 'replace_that', 'with_this');
Kpọmkwem na WordPress:
melite `` wp_posts` setịpụrụ 'post_content` = dochie (' 'post_content`,' replace_that ',' with_this ');
Iji dozie esemokwu m, edere m ajụjụ a iji dochie “onyonyo =‘ aka nri ’” na “onyonyo =’ aka ekpe ’”.
IHE: Jide n'aka na ị ga - akwado data gị tupu imalite mmelite a !!!
Tags: MySQLMySQL dochiemysql ọchụchọdochieChọọ Marketingwp_posts
Mee 14, 2007 na 8: 46 AM
Ọ dị mma, Doug. Echere m na a na-echekwa usoro ntinye gị nke ọma.
Mee 14, 2007 na 6: 58 PM
Daalụ Slaptijack! M gbanwetụrụ m sub-isiokwu size taa na-arụ ọrụ na ụfọdụ spacing na m CSS. Tweakin, tweakin, tweakin!
Mee 14, 2007 na 11: 50 AM
Daalụ maka ịmatakwu ihe ọmụma banyere isiokwu a. Ahụla m ka mgbasa ozi aka ekpe ma ọ bụ aka nri ziri ezi tupu na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ ka o wee yie ebe a ma ama. Mgbasa ozi gị na-asọpụta nke ọma n'aka nri nke post.
Enwere m ike ịgbanwe gaa n'aka nri na-egosi na mgbasa ozi m dịkwa nso n'ọdịnihu dị nso. Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ ma ọ bụrụ na enwetakwa ego ọzọ.
Mee 14, 2007 na 6: 34 PM
Aga m achọta ha. Ihe ngosi zuru ezu gbadatụrụ ntakịrị ugbu a, n'ihi ya, ego na-adaba. Aga m enye ya izu ole na ole iji hụ! Aga m ejide n'aka na ị ga-akọ na ya.
Mee 14, 2007 na 2: 51 PM
Nweta ihe ọ bụla na mgbasa ozi ọkọlọtọ na peeji ndeksi gị, Doug? Emeghị m nke ọma na ha.
Na mkpokọta, mgbasa ozi in-post (180 na 250 n'obosara) na mgbasa ozi mgbe post (336 n'obosara) enwetala nlebara anya kachasị.
Mee 14, 2007 na 6: 56 PM
Na-akpali mmasị, Rick. M n'ezie messed na adịghị nsuso mgbasa ozi site na ibe ruo ihe dị ka otu izu gara aga. Ruo ugbu a, enweghị ọnụọgụ na ibe ndeksi! Ọ bụ ihe m ga-elekwasị anya.
Mee 15, 2007 na 2: 16 PM
Nke mmasị. You gbanwee faịlụ template gị iji gosipụta mgbasa ozi na posts gị, ma ọ bụ na ị na-eji ngwa mgbakwunye iji jikwaa mgbasa ozi.
Mee 15, 2007 na 8: 58 PM
M na-eji nchikota. Enwere m PostPost ngwa mgbakwunye M dere… mana ọ naghị eme ihe m chọrọ. Ikekwe nhapụ ma ọ bụ abụọ n'ọdịnihu?
Ndị ọzọ m na-edezi na isiokwu m.
Jul 28, 2007 na 3: 35 AM
nwere nsogbu imelite nke abụọ na “aka nri” sonyere na MySQL
Melite ivr_data SET RIGHT (TIME, 2) = '00' WHERE RIGHT (Oge, 2)! = '00';
Hey Doug. Naanị jiri ntuziaka gị iji melite adreesị email m na WP DB m. Na-arụ ọrụ dị ka amara. Daalụ.
BTW, wee gafee a post na Google, na-enyocha “iji MySQL search dochie ajụjụ.” Bịa nke 3.
Woohoo! Nke 3 dị mma! Saịtị m yiri ka enwetala nnukwu nnabata na Search Engines n'afọ gara aga. O doro anya na, m na-akwado karịa ọtụtụ blọọgụ Nchọgharị Nchọgharị. 🙂
Dec 9, 2008 na 5:05 PM
nke a yiri ka ọ na-arụ ọrụ ka mma maka mysql… ..
Melite wp_posts SET post_content = dochie (post_content, 'Dochie nke a', 'Na nke ahụ');
Jenụwarị 5, 2009 na 6:55 PM
Nke a rụụrụ m ọrụ
Melite wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content, 'www.alznews.net', 'www.alzdigest.com');
ikekwe 'dochie anya' ọ dị mkpa iji nnukwu ego
Ihe Nleba M X
Ọkt 7, 2009 na 2:47 PM
Daalụ, m na-achọ ajụjụ a
Nov 4, 2009 na 4:28 PM
Daalụ! M kwusiri ike na iji "ọ bụghị 'gburugburu nchọta na dochie ederede. M na-eji ya ịmegharị data SQL niile site n'otu weebụsaịtị gaa na nke ọzọ. Ọ zọpụtara ọtụtụ ọrụ!
walmley web imewe
Feb 1, 2011 na 1:37 PM
Achọrọ m iji dochie eriri n'ime MySQL na njem, mana ubi ahụ nwere ike ịnwe ihe 2. N'ihi ya, m gbanye Gbanwee () n'ime REPLACE (), dị ka:
Gbanwee (Gbanwee (aha ubi), "ihe anyị na-achọ", "dochie ihe mbụ"), "ihe ọzọ anyị na-achọ", "dochie nke abụọ")
Nke a bụ syntax m jiri chọpụta uru goolean:
Gbanwee (Gbanwee (ubi, 1, "Ee"), 0, "Mba")
Olileanya na nke a na-enyere aka!